I-alloy steel Factory | China Ingxubevange steel Abavelisi, Suppliers
Uxinzelelo oluphezulu lwe-A53 umenzi wemibhobho yentsimbi engenamthungo
Umbhobho wensimbi ongenamthungo we-A53 yimbhobho yensimbi esemgangathweni yaseMelika, apho i-a53-a ilingana nentsimbi yasekhaya 10 #, i-a53-b ilingana nentsimbi yasekhaya ye-20 #, kunye ne-a53-f ilingana ne-Q235 yasekhaya.
Uqinisekiso lokwenyani lomgangatho wombhobho wentsimbi ye-ST52
Intsimbi engeyiyo i-alloy ithathwa njengentsimbi yolwakhiwo oluqhelekileyo, olubonakaliswa ngamandla okuqina kunye nenqaku lesivuno.
Ukuthengiswa kwewaranti ye-30CrMo yomenzi wepayipi yensimbi ye-alloy
I-16Mn i-alloy low-alloy high-high-force structure steel: umxholo wekhabhoni ngu-0.1% - 0.25%, kunye nezinto eziphambili ze-alloy manganese, i-silicon, i-vanadium, i-niobium kunye ne-titanium yongezwa; Umxholo wayo opheleleyo we-alloy ungaphantsi kwe-3%.
I-30CrMo ingxubevange yombhobho yentsimbi inomxholo wekhabhoni we-0.26 ~ 0.34, umxholo wesilicon ye-0.17 ~ 0.37, umxholo we-manganese we-0.40 ~ 0.70, umxholo we-molybdenum we-0.15 ~ 0.25, umxholo we-chromium we-0.80 ~ 1.10.
12Cr1MoVG uxinzelelo oluphezulu lwentsimbi yombhobho wokuqinisekisa umgangatho
Indawo yokusetyenziswa kwe-alloy pipe ye-12Cr1MoVG yandisiwe ukuze ibonelele indawo ebanzi yophuhliso loshishino.
Ukuthengiswa kwewaranti yendawo ye-42CrMo abavelisi bemibhobho yentsimbi yealloy
Injongo ye-42CrMo ipayipi yensimbi engenamthungo: intsimbi ekhethekileyo yebhuloho yi "42CrMo", intsimbi ekhethekileyo ye-automobile girder yi "42CrMo", kunye nentsimbi ekhethekileyo yomkhumbi woxinzelelo "42CrMo".